Isitendi sokubonisa se-3D Abakhiqizi - Isitendi sokubonisa saseChina 3D Abahlinzeki & Ifektri
Isibhengezo sombhoshongo siwumumo wephiramidi ohlanekezelwe onezinhlangothi ezi-3 zokubonisa.Umumo omude futhi oyingqayizivele uzokwenza ukuthi ugqame embukisweni noma emicimbini.3 imiklamo ehlukene noma konke okufanayo kungenzeka kuye ngezidingo zakho.
Isibhengezo se-tornado siqanjwe ngesimo saso, isibhengezo se-3D cylinder display.Ngokungafani nesibhengezo seBurgundy noma isibhengezo selambu, isibhengezo senkanyamba siyisithombe esiphelele esingaphazanyiswa.Iyakwazi ukuzungeza emoyeni.Ukusetshenziswa kwangaphakathi noma kwangaphandle njengombukiso, umbukiso wezohwebo, inxanxathela yezitolo njll.
I-Toblerone banner ibizwa ngegama likashokoledi njengoba inomumo ofanayo.Ngokuhlanganisa amabhanela aqondile angu-3, ​​ungaba nendawo enkulu ephrintekayo.Ingasetshenziswa futhi njengesibhengezo esivundlile.Ungasebenzisa ezikhathini ezahlukene uma kudingeka, okungakonga izindleko zakho nesikhathi.Bobabili bobunjwa kulula ukushintsha ihluzo.
Isibhengezo sephiramidi, izitendi zezibhengezo eziphathwayo ezinamaceleni angu-4, inketho enhle yokuthi usethe isibonisi sakho ngokushesha emicimbini.Ngomumo omusha kanye nomthelela wezinhlangothi eziningi, kukwenza ugqame ngokuphelele.Ivuleka njengesambulela.Kulula ukusetha nokwehlisa.Ungakwazi ukushintsha izithombe kalula uma umlayezo wakho ushintsha.Umklamo wangempela wama-wzrods.
Isibhengezo esiqhamuka phezulu siyi-A-Frame Structure.Kulula ukuyisebenzisa, ukugoqa, ukugcina nokuthutha.Enye imodeli yesibhengezo se-pop up ukuze ihambisane nezidingo zakho.Isetshenziswa kabanzi ezindaweni zegalofu, emikhosini yasehlobo, izingadi, amasimu kanye nemicimbi yasogwini neminye imisebenzi.Njengoba yenzelwe ngaphandle, ayizweli, iphephile, iyaphatheka futhi ifanele ukuboniswa kokumaketha.
Izibhengezo zikabhontshisi, eziqanjwe ngesimo sawo esiyiqanda, aziwa nangokuthiPop Up A-Frame Izibhengezo , Isibhengezo se-Pop Out sangaphandles nomaAmabhanela Aseceleni, kuwuphawu lwesibhengezo esikhangayo esikhangayo, esingasindi futhi esikahle esingasethwa futhi sehliswe phakathi kwamasekhondi angamashumi amathathu.Ihluzo ezisemaceleni amabili zinikeza ukuchayeka okuphezulu.Ilungele imicimbi yezemidlalo, ukukhushulwa, imibukiso yezohwebo, nezimpawu eziqondisayo.
Isibhengezo senyanga esiwuhhafu asisindi futhi siyaphatheka, singasetshenziswa endlini noma ngaphandle, sifana nezibhengezo ze-Pop out noma izibhengezo ze-Sideline A-frame, inketho enhle yokuthi usethe isibonisi sakho ngokushesha emicimbini.Ingasethwa kalula phakathi kwamaminithi futhi ifakwe ngosayizi omncane.Ungavele uguqule imidwebo uma umlayezo wakho ushintsha.ingasetshenziswa njengesibonisi esisodwa noma esikabili.